A senior UN official voiced concern yesterday about the prospect of food shortages in Zimbabwe as a result of the decision by President Robert Mugabe's regime to refuse further food aid. James Morris, executive director of the World Food Programme, challenged the Zimbabwe government's claims of a bumper 2004 crop of maize, the staple food.Following a harvest of less than 1m tonnes the year before, such a turnround would be "staggering" if true, he said.
New evidence of alleged attacks on opposition supporters in Zimbabwe has been passed to British newspaper The Guardian by activists who say they are being subjected to systematic violence, intimidation and sexual abuse in the run-up to elections in March.Read the rest here.
THE United States signalled a hardening of its stance on President Robert Mugabe's regime on Tuesday when Secretary of State-designate Condoleezza Rice named Zimbabwe in a list of six countries the US considers as outlaw States.Read the full article here.
ZANU-PF has been in power in Zimbabwe since the country gained independene from Britain in 1980. posted at 8:25 pm